Casharro: Isku dar weji tufaax ah (ii) | Abuurista khadka tooska ah
Waxaan sii wadaynaa qaybtaan labaad ee casharrada si dhammee inta ka hartay muuqaalada wajiga oo ku dar faahfaahin qaar sida caleen taajka dusheeda iyo dixirigoodu doonayo inuu ku fuulo madaxa saaxiibkeen.
Waxaan isku dayay inaan bixiyo faahfaahinta ugu badan ee suurtogalka ah, laakiin haddii uu jiro wax shaki ah ... Waxaan dhaamayaa inaan dhammeeyo xukunka, sax? ;)
Tallaabada xigta waxay noqon doontaa in la soo dejiyo sawirka aan ka faa'iideysaneyno afka. Waxaan yareyn doonnaa daah-furnaanteeda illaa aan si cad u kala saari karno labada lakab. Mid tufaax leh iyo mid gabadha la socda. Waxaan ku badali doonnaa cabirkeeda ikhtiyaarka beddelka (horayba waad u ogayd inaad ka heli karto xulashadan Edit> Transform menu ama adigoo riixaya furaha Ctrl + T).
Marka aan sawirka ku helno meesha saxda ah, waxaan dooran doonaa aalad xulasho (waxaan badanaa doortaa lasg polygonal maxaa yeelay waa mida aan sida ugu fiican u maareeyo, laakiin waxaad dooran kartaa midka kuugu muuqda midka kuugu raaxada badan) waxaana dooran doonaa aagga bushimaha oo ay ku jiraan khadadka ganaaxa. Tani waxay na siin doontaa muujinta iyo xaqiiqda dhabta ah.
Waxaan aadeynaa Xulitaanka msnú> Invert. Waxaan dooran doonnaa aagga dibedda ka dibna waxaan riixi doonnaa badhanka tirtirka (tirtir) si loo tirtiro aagga dibedda ee aynaan u xiiseyneynin.
Waxaan ku dabaqi doonnaa qaabka isku-darka Luminosity lakabkan oo waxaan arki doonnaa in si fiican loogu dhex milmay tufaaxa (waxay heshay midabkeeda). Laakiin cidhifyada sawirka afku wali waa iska cadahay waxa aan hadda yeeli doonana waa jilicsanaanayaa oo qarinaynaa.
Waxaan u tagi doonnaa lakabka bushimaha oo waxaan ka dooran doonnaa aaladda masixi ee ka timi qalabka qalabka. Iyada oo burush aad u baahsan, cabir ku habboon iyo opacity oo ah 65% si loogu sameeyo si kafiican, waxaan bilaabi doonnaa in aan tirtirno geesahaas waxaanan kula midoobi doonnaa tufaaxa qaab macquul ah.
Waxaan mar labaad u adeegsan doonnaa qalabka hoos u dhigga soo-saarka 50% iyo cabbir burush ah oo fadhiya qiyaastii rubuc ka mid ah dhismaha, oo waxaan si fudud u eegi doonnaa aagga saxda ah ee ugu hadhka badan si dhabanka midig iyo geesku u fiicnaadaan.
Laakiin sida aad qiyaasi doonto, waxaan xiiseyneynaa inaan ilaalino midabka ciridka iyo ilkaha. Sababtaas awgeed ayaan ku soo laba jibbaareynaa lakabkan 'Ctrl + J ama' menu-ka lakabka oo leh badhanka midig ee jiirkayaga 'lakabka Nuqullaha ah'.
Aaladda magnetic lasso, waxaan dul mari doonnaa dhammaan qaybta gudaha ee afka oo waxaan ku dhammaystiri doonnaa xulashadan lasso polygonal, ku darista ama yareynta aagga la xushay sida ugu habboon. (Alt + Selection si loo yareeyo iyo Shift + Xulka si loo weyneeyo aaggeenna la soo xulay). Haddii aad doorbideyso, waxaad ku dari kartaa xulashadan aagga bushimaha si aad u siiso midabkooda dabiiciga laakiin shaqsi ahaan, waxay ila tahay inay si fiican u daaweyso oo keliya ciridka iyo gudaha afka. Ka dib waxaan dib ugu laabaneynaa menu-ka Xulista> Invert oo waxaan ku baabi'in doonnaa furaha Furaha aagga dibedda ee aan na daneyneyn.
Marka xigta waxaan soo dejin doonnaa sawirka aan uga faa'iideysan doono sanka. Waxaan yareyn doonaa daah-furnaanteeda illaa aan si tayo leh ugu shaqeyn karno waana qeexi doonnaa booska ugu guusha badan. Maskaxda ku hay in buundada sanku ay tahay inay iswaafajiso khadadka sare ee indhaha si loogu oggolaado isdhexgal iyo mug weyn. Marka tan la dhammeeyo, waxaan adeegsan doonnaa aaladda xulashada oo aan mar kale dooneyno waxaanan sawiri doonnaa aagga daboolaya sanka oo dhan iyo aagga sare ee indhaha ku soo biiraya. Aaggan waa muhiim.
Si aad u siiso muuqaal kaftan badan, waxaan waxyar ka beddeli doonnaa muuqaalka sanka, taasoo ka dhigaysa mid sii dheereeya. Waxaan aadi doonnaa tafatirka> Bedelka> Skew menu.
Isticmaalka gacmaha kore waxaan siineynaa qaab dhismeed saddexagal leh waana sifeyneynaa.
Marka xigta waxaan raaci doonnaa isla nidaamkii aan ku fulin jirnay qeybaha kale ee wajiga. Waxaan ku dabaqi doonnaa qaab isku-dhaf ah Iftiinka sidoo kale waxaan saameyn ku yeelan doonnaa farqiga u dhexeeya. Waxaan aadi doonnaa Sawirka> Isku hagaajinta> Liistada Heerarka. Waxaan dejiyay qiimayaasha 17 / 0,78 / 255 in kastoo aad isku dayi kartid kuwa kale. Waxa aan dooneyno waa inaan isku dhigno xoojinta aagagga hadhka leh ee afka iyo meelaha hadhka leh ee sanka. Tani waxay sidoo kale heli doontaa muujinta weyn. Si aan u jilciyo meelaha ugu ifka san sanka waxaan u adeegsaday qalabka wax tirtiraha oo leh madmadow 50% maxaa yeelay waxay ila muuqatay inay si aad ah uga soo baxayso heesta isla markaana dhac ka sameysay xaqiiqada.
Waxaan sidoo kale ku dari doonaa "sidii timo ahaan" caleen yar oo taaj ka ah jirida sare. Si tan loo sameeyo, waxaan soo dhoofiyay sawir, waxaan wax ka beddelay cabirkiisa oo waxaan dhigay meeshii ugu habboon iyadoo la adeegsanayo aaladda wareejinta. (Wax ka beddel> Beddel> Wareeji). Waxa kale oo aan waxyar ku beddelay qaab-dhismeedkeeda oo leh shaandho sawir qabow ah iyo qaddar dhan 20%.
Dixiriga waxaan ku sameeyay si isku mid ah marka laga reebo tallaabada shaandhada sawirka. Xulashada dixirigu wax xoogaa wuu ka murugsanaa, gaar ahaan deegaanka ay ku sugnayd, qalab kasta oo xul ah oo aan ku filnayn, sidaa darteed waxa aan qabtay ayaa ah in lagu xusho asalka aaladda sixirka oo markaas la dhammaystiro dhammaan halos midab leh maaskaro lakab ah. Waxaan abuuray maaskaro lakab ah iyo midab madow oo hore iyo caday cadayan waxaan si taxaddar leh dib ugu xirxiray lugaha iyo dulucda.
Ugu dambeyntiina, waxaan adeegsaday aaladda gubashada si aan u xoojiyo hooska muuqaalka asalka ah sidaasna aan u siiyo goobta muuqaal iyo mug badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Tabobar: Wejiga ku dar tufaax (ii)